अविवाहित र एक्ला महिलाहरुलाई महिनैपिच्छे भत्ता ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/अविवाहित र एक्ला महिलाहरुलाई महिनैपिच्छे भत्ता !
विवाह नगरी बसेका अविवाहित महिलाले अब ४० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि भत्ता पाउने भएका छन् । यस्तै पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेका एक्ला महिलाले पनि ४० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेछन् ।भर्खरै सरकारले अध्यादेशबाट यस्ताे व्यवस्था गरे पनि मासिक रुपमा कति उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय भइसकेकाे छैन् । अध्यादेशमा पाउने भन्ने व्यवस्था भएकाले अब मन्त्रिषरिषद्बबाट कति पाउने भनेर ताेकिए पछि उनिहरुले पाउन सुरु गर्नेछन् ।
जयूदै मान्छेलाई मरेको भन्दै समचार आयपछि रश्मि भट्ट रुदै लाईभ’मा (हे’र्नुस भीडीयो)